Iimpawu kunye neemfihlo ze-octopus enkulu | Ngeentlanzi
IiOctopus zizilwanyana ezizodwa eziyothusa ngaphezu kwesinye. Uninzi lwabalandeli abathanda ukuntywila kwaye bavavanye ii-octopus phakathi kweentlobo zabo abazithandayo. Kule meko, siza kuthetha nge-octopus enobungakanani obufikelela kwirekhodi ngobukhulu bayo. Malunga nayo ingwane enkulu. Esi silwanyana sibaluleke kakhulu kwaye, ngelixa ezinye iintlobo ze-octopus zinokulinganisa ii-intshi ezimbalwa ubude, le ngwane inokulinganisa i-15 yeenyawo.
Kule nqaku siza kutyhila kuwe iimfihlelo ezinzulu ze-octopus enkulu ukuze ufunde ngakumbi malunga nesi silwanyana kunye neemfihlelo zolwandle.
2 Indaleko kunye nokuziphatha
3 Indawo yokuhlala nokondla i-octopus enkulu
Umahluko ngobukhulu phakathi kwesi silwanyana kunye nezinye zohlobo lwayo yinto engakholelekiyo. Abanye oososayensi bathi inokulinganisa nangaphezulu kunoko kubhaliweyo. Oko kukuthi, kukho ezinye iisampulu ezinkulu. Kwaye ukuba isilwanyana esinobunzima beepawundi ezili-150 kunye nemilinganiselo yeenyawo ezili-15 ubude ayinakuba yinto eqhelekileyo.
Inesakhono esikhulu sokudibanisa ngokungqonge indawo ekungqongileyo ngokulula nangona isayizi yayo. Kunokuba lula ukuphosa ubukho bakhe, nokuba ulungile phambi kwakho. Obu buchule buphuculwa lutshintsho olwenziwe kumbala womzimba. Yinto emangalisayo ngokwenene. Oku kufihlwa kuye kwafuneka kuphuculwe kuba, kuba inkulu kwaye inzima, ayinakushukuma ngokulula okanye ifihle kwimingxunya yamatye njengokuba iqhele ukwenzeka kwezinye iingwane.
Ke ngoko, ukuze bazikhusele kumarhamncwa, banolu hlobo olulodwa. Ngokwesiqhelo, umbala wayo ophambili ubomvu kwaye umdaka. Ingaboniswa ngokukhanya kunye neetoni ezimnyama. Nangona kunjalo, njengoko ihlala kwindawo ezahlukeneyo kakhulu, iyakwazi ukujika iphantse ibe ngumbala.
I-anatomy yayo inomdla kakhulu. Zidla ngokulala emazantsi olwandle ngokungathi ziinkwenkwezi. Le nyaniso ithetha ukuba inokuthintela amanye amarhamncwa ukuba angaqatshelwa ngasemva. Iingalo zinde kakhulu kwaye zishinyene. Inenani elikhulu leekomityi zokutsala.
Inentloko enkulu ngokuthelekiswa nezinye iintlobo zeengwane. Elinye lala malungu linengubo linobume obungqongqo. Oku kwenza ukuba kube nakho ukuhamba ngaphandle komzamo omkhulu.
Indaleko kunye nokuziphatha
Akukho mntu waziyo ngokuqinisekileyo ukuba kwenzeke ntoni kwindaleko enkulu kwi-octopus enkulu yokuba nezi mpawu. Kukho uqikelelo malunga nokuba batshintshe njani kwiimpawu zabo ukusuka kwizigidi zeminyaka eyadlulayo ukuza kuthi ga namhlanje.
Abanye oososayensi bacinga ukuba bakwazile ukuziqhelanisa neemeko ngokuhamba kwexesha ukuze baphile kwiimeko ezahlukeneyo. Ukuphuhliswa kweengalo ezininzi kunokunxulumana nenkqubo yokuzivelela kwabo. Khankanya nokufihla okukunceda ukuba ungabonakali.
Ngokuphathelene nokuziphatha kwabo, akukho lwazi lungako malunga nalo. Nangona kunjalo, kuyaziwa ukuba unamandla okufunda izinto ezininzi njengoko iintsuku zihamba. Oku kuyenza ilungelelane neemeko ezintsha kwaye iphile ngokulula. Ezinye zezihlobo zakho ziyabonakala ukuba zikhumbula kakuhle kwaye oku kuyanceda ukusombulula iingxaki ezithile.
Ezi octopus ziyakoyikisa ngokulula xa usiya emanzini kuba zingahambi ngokukhawuleza njengezinye. Ukubaleka, bakhupha i-inki eninzi rhoqo kunye nomthamo omkhulu ngenxa yokuba namadlala amakhulu.
Indawo yokuhlala nokondla i-octopus enkulu
I-octopus enkulu ihlala kuMantla oLwandlekazi lwePasifiki. Likhaya lolu hlobo kwaye luhlala malunga neemitha ezingama-200 phantsi kolwandle. Kumanzi anzulu kubonwe ukukhangela ukutya okuninzi. Oku ukwenza xa engakufumani ukutya okufunwayo okanye kungekho ndawo yokuzifihla ukuze akhuseleke.
Ngokuphathelele ukutya, bachitha ubusuku bonke bekhangela ukutya. Ukungancedi ekubeni luhlobo olukhulu kukuba kufuneka batye ngakumbi ukwandisa amandla abo kunye nokuhlala besempilweni.
Ngokwesiqhelo abanangxaki yokufumana ukutya kwindawo yendalo. Okunye kokutya abakutyayo kakhulu yintlanzi, iiflam, oononkala kunye nezinye i-shrimp. Nangona kunzima kakhulu ukucinga, abanye ookrebe babanjiswa yile ngwane enkulu. Xa ezi octopus zitya ukrebe, zihlala zanelisiwe ixesha elide ngokwaneleyo ukuba zingakhangeli ukutya kangangeentsuku ezininzi. Ngokwesiqhelo luhlobo olungenelelayo oluthatha ithuba kuyo nayiphi na into enokwenzeka kwindalo esingqongileyo ukufumana ukutya.
Inyani yokuba iyakwazi ukutya ookrebe iqinisekisiwe ngophononongo lweziqulatho zesisu zezinye iisampulu ezifundiweyo.
Ngexesha lokukhwelana, inkunzi nemazi ziyadibana. Lixesha ekuphela kwalo lokuba abantu besini kunye babe kunye. Ngokwesiqhelo, zahluliwe ukuba zizidalwa ezizodwa. Indoda ithatha idlozi kwaye ilibeke kwimpahla yabasetyhini. Le ngxowa inomaleko oyikhuselayo ekuqhekekeni kwimeko yayo nayiphi na into embi. Kufuneka ikhuselwe kakuhle kuba umntu obhinqileyo kufuneka ayithwale iinyanga ezi-6 phambi kokuba amaqanda akulungele ukuqanduselwa aze aqandusele.
Ingxowa yendoda ezaliswe ngamadlozi ivumela malunga namaqanda ayi-100.000 ukuba agcinwe. Ngokucacileyo, ayingawo onke amaqanda aba ngabantu abadala. Ukukhula kwamaqanda kungathatha iiveki ezininzi. Ngeli xesha, umntu obhinqileyo unokubaluleka kokuzigcina kwaye abeke abancinci bakhe phambi kweemfuno zakhe.
Iyakwenza konke okusemandleni ayo ukukhusela amantshontsho ayo kumarhamncwa kwaye igcine amaqanda ecocekile ukuze kungabikho ngxaki. Xa amaqanda eqandusele, imazi ihlala ifa esiphelweni sobomi bayo. Indoda idla ngokusweleka kwangoko, xa sele itshatile.
Ixesha lokuphila koluhlobo lumalunga neminyaka emi-3 ukuya kwemihlanu. Ngowasetyhini oqinisekisa ukusinda kohlobo. Kumaqanda ayi-100.000 1.000 ekuqaleni, ngabantu abali-XNUMX XNUMX kuphela abadla ngokusinda ekugqibeleni.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-octopus enkulu kunye neemfihlo ezigcinayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ingwane enkulu